बीच सडकमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ २७, २०७४ डा. कपिलमणि केसी
काठमाडौँ — आजभोलि नसा च्यापिने रोगसँंग धेरै मानिस परिचित छन्। मानिसको संवेदनशीलता यति धेरै बढिरहेको छ कि शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म कुनै अंगमा दुखाइ भए नसाको कारणले हो भनेर बुझ्ने परम्परा बढ्दो छ।
घुँडा दुख्ने कुनै–कुनै बिरामीलेआफूलाई घुँडाको नसा दुखेको बताउँछन्। वास्तवमा घुँडाको नसा भनेर बिरामीलाईआफै थाहा हुने सम्भावना कम हुन्छ। मानव शरीरको घँुंडामा नसामात्र नभएरछाला, मासु, लिगामेन्ट, टेन्डन र हड्डीजस्ता चिज हुन्छन्। त्यसकारण पनि कुनैअंगमा दुखाइ भए त्यो नसाले हो वा होइन भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ।
घुँडामा भएको दुखाइ नसाले मात्र नभएर हड्डी खिएर, लिगामेन्ट च्यातिएर, मासुतन्किएर, टेन्डनमा समस्या भएर, युरिक एसिड, बाथ लगायत अरू थुप्रै कारणलेहुनसक्छ। नसाले भएको दुखाइ ढाडबाट सुरु भएर घुँडा हुँदै खुट्टासम्म पुग्छ। हड्डीखिएको दुखाइ सुरुको अवस्थामा पलँेटी मारेर बस्दा, टुक्रुक्क बस्दा, भर्‍याङमातलमाथि गर्दा गाह्रो हुने, बसेर उठ्दा अप्ठ्यारो हुने वा हात टेकेर मात्र उठ्न सक्नेहुन्छ। दुखाइ एक ठाउँमा मात्र सीमित नभएर घुँडाको अगाडि–पछाडि, साइड–साइड वाकहिलेकाहीं तिघ्राको मासुसम्म पनि हुन्छ। बिरामीले दुखाइ हड्डीबाट भएको नभईमासु वा नसाबाट भएको महसुस गर्ने भएकाले यो समस्या हड्डी खिएर हो भनेरस्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। लिगामेन्ट च्यातिएर र मासु तन्किएर हुने दुखाइमा लडेकोपृष्ठभूमि हुन्छ। त्यसैगरी युरिक एसिड र बाथको समस्या भए कुनै कारणबिनाअचानक घँुडा सुन्निने र दुख्ने हुन्छ।
सामान्यतया मानव शरीरमा ढाड र घांँटी पछाडिको मेरुदण्डको हड्डीमा नसाच्यापिन सक्छ। अझै विस्तृत रूपमा भन्दा मेरुदण्डमा भएका हड्डीहरूको बीचमारहेको कुरकुरे हड्डी अथवा डिस्क पछाडि सरेर नसा च्यापिन्छ। यी बाहेक मेरुदण्डकोहड्डी भाँच्चिएर, हड्डी पलाएर वा दुई हड्डीहरूको बीचमा अवस्थित नसा पास हुनेबाटो साँंघुरो भएर पनि नसा च्यापिन सक्छ। ढाडको नसा च्यापिँदा दुखाइ ढाडबाटसुरु भएर दायाँ वा बायाँ खुट्टाको पैतलासम्म पुग्छ। दुखाइको मात्रा यति बढी हुन्छकि बिरामी सुत्दा, कोल्टे फर्कंदा, हिँडडुल गर्दा वा अरू सामान्य प्रकृतिका दैनिककाम गर्न पनि निकै कठिनाइ हुन्छ। दुखाइका साथसाथै तिघ्रा र खुट्टाका केहीभागमा छुएको थाहा नहुने, झमझम गर्ने, लाटो हुने, पूरा तागत नभएको जस्तोमहसुस हुन्छ र सुतेर खुट्टालाई सिधा बनाई माथि उठाउन गाह्रो हुन्छ। ठूलोसाइजको कुरकुरे हड्डी पछाडि सरेर ढाडमा भएका धेरै नसा एकैपटक च्यापिएदिसा–पिसाब भएको पनि थाहा नहुन सक्छ जसलाई कौडा इक्वेना सिन्ड्रम भनिन्छ।
यो नसा च्यापिएको एकदमै गम्भीर अवस्था हो, जसमा ४८ घन्टाभित्र शल्यक्रियानगरे दिसा–पिसाब गर्ने र खुट्टा चलाउने नसा पूर्णरूपमा बिग्रन सक्छ। घाँंटीपछाडिको हड्डीमा दुई तरिकाले नसा च्यापिन सक्छ। धेरैजसो बेला हातमा जाने नसाच्यापिँदा दुखाइ घांँटीबाट सुरु भएर पाखुरा, कुहिना हुँदै हातसम्म पुग्छ। हातकोकुनै निश्चित भागमा छोएको राम्रोसंँग थाहा नहुने वा झमझम गर्ने हुन्छ। घांँटीपछाडि भएको मूल नसा वा स्पाइनल कर्ड नै च्यापिए बिरामीहरू अनियन्त्रित भएरहिँड्ने वा रक्सी खाएको मान्छेजस्तै हिँड्ने, हातखुट्टा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ननसक्ने र दिसा–पिसाब पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुन्छ, जसलाई सर्भाइकलमाएलोप्याथी भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि शल्यक्रिया गरेर मात्र मूल नसालाई
बिग्रनबाट बचाउन सकिन्छ।
यी बाहेक पाखुरा, कुहिना, नाडी, तिघ्राको माथिल्लो भाग र कुर्कुच्चानेर पनि नसाच्यापिन सक्छ। पाखुरानेर भएको नसा, जसलाई रेडियल नर्भ भनिन्छ, च्यापियो भनेनाडीको जोर्नीबाट हातलाई माथि उठाउन सकिँदैन र बूढी औंलाको बेसमा छोएकोथाहा हँुदैन। कुहिनाको भित्री भागमा रहेको अल्नार नर्भ भन्ने नसा च्यापिए कान्छीऔंलाको पूरा भाग र साहिली औंलाको आधा भाग लाटो हुनुका साथै हत्केलाकोवरिपरि भएको मासु सुक्दै जान्छ। यसका साथै हातको तागत पनि कम भएकोमहसुस हुन्छ। नाडीनेर भएको मेडिएन नर्भ भन्ने नसा च्यापिने अवस्थालाई कार्पलटनेल सिन्ड्रम भनिन्छ। यो समस्या शरीरको तौल ज्यादा भएका, कम्प्युटरमालगातार काम गर्ने, थाइराइडको समस्या भएका र गर्भवती भएका महिलालाई बढीहुन्छ। यो समस्या भए बूढी औंलाको साइडतिर भएका तीनवटा औंलामा लाटो हुने,झमझम गर्ने र दुखाइ हुने हुन्छ। दुखाइ विशेषगरी रातको समयमा हुने गर्छ रदुखाइकै कारणले बिरामीहरू निद्राबाट पटक–पटक उठ्ने र हातलाई झड्काउने गर्छन्।
त्यसैगरी तिघ्राको माथिल्लो भागमा घँुंडानेरको कमन पेरोनिएल भन्ने नसाच्यापिए खुट्टा कुर्कुच्चाको जोर्नीबाट माथि उठाउन सकिँदैन र खुट्टा लत्रिएरहिँड्नुपर्ने हुन्छ। कुर्कुच्चाको जोर्नीनेर भएको प्लान्टर नर्भ भन्ने नसा च्यापिएपैतालाको भाग दुख्ने र झमझम गर्ने हुन्छ।लक्षणहरूलाई राम्रोसंँग अध्ययन गरिसकेपछि कुन समस्या नसाले हो र कुन समस्याअरू कारणले हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुँदैन। प्राय:गरी बिरामीले औषधी पसलमाकाम गर्ने फर्मासिस्ट र नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीसंँग सरसल्लाह लिनेगर्छन्। उनीहरूलाई सही विषयको विशेषज्ञ डाक्टरकहाँ पठाउने सल्लाह दिनुपर्छ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले पनि आफ्नो विषयभित्र नपरेका बिरामीलाई सबै जांँचएकैपटक गराएर हेर्नुभन्दा सम्बन्धित विभागका चिकित्सकलाई रेफर गर्दा राम्रोहुन्छ। यसो गर्दा बिरामीलाई आर्थिक भार कम पर्नुका साथै उपचार छिटोछरितो रगुणस्तरीय बन्छ।
डा. केसी अर्थोपेडिक सर्जन हुन्।
प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०७:५२